Uyini umncintiswano wokudlulisa? | Ukwakheka nezifundo
UMaite Nicuesa | 24/05/2021 21:56 | Ukuziqeqesha
Enye yezinzuzo zokuba isisebenzi sikahulumeni ukuthi lesi sikhundla sobuchwepheshe sinikeza ukuzinza kwezezimali. Labo asebevele benesimo esinqunyiwe, babona ikusasa labo ngeso lengqondo ngokusungula ubudlelwane phakathi kwesimo sabo samanje nalesi simo esingahle senzeke. Kodwa-ke, yize ukuphepha kwezomnotho kuchaza ukuzinza kobungcweti empilweni yesikhulu, lokhu akusho ukuthi izinguquko azikho emsebenzini walabo abasebenzela Ukuphatha komphakathi. Kungenzeka ukuthi ngesikhathi esithile, lowochwepheshe unquma ukuqala isigaba esisha kwenye indawo.
Ushintsho olusho ukuthuthela komunye umasipala futhi, ngakho-ke, sishiya emuva inkambiso ebiyigcina kuze kube yileso sikhathi. Umncintiswano wokudlulisa akuyona inqubo esetshenziswe kuleli cala kuphelaEsikhundleni salokho, lokhu kusho ukuthi kwaziwa njengendawo yokugcina isisebenzi sikahulumeni esisebenza kuyo. Ngaleso sikhathi, wathi uchwepheshe usevele unendawo yakhe.
1 Umncintiswano wokuzimela noma wesifundazwe
2 Isilinganiso sokufaneleka singenelela kanjani emncintiswaneni wokudlulisa
3 Ukuletha nini ukushiya phansi
Umncintiswano wokuzimela noma wesifundazwe
Yebo, umncintiswano wokudlulisa unentshisekelo ethile kulabo abakulesi simo. Ngale nqubo, uchwepheshe angalenza lolu hlelo lube semthethweni ngokufaka izicelo zezikhundla ezitholakala kwezinye izikhungo. Lo mncintiswano ungazimela noma umbuso. Ngokuya ngohlobo lomncintiswano, indawo okuyiwa kuyo yakhelwe kumongo ohlukile noma kwenye.
Kule nqubo, kucatshangelwa izici ezahlukahlukene, njengesibonelo, isilinganiso sokufaneleka. Ukuhambisa isicelo sakho emncintiswaneni walezi zici, kubalulekile ukuthi unake ukushicilelwa kocingo olulandelayo. Ngale ndlela, ungenza isicelo sakho sibe semthethweni. Khumbula ukuthi abanye ochwepheshe abaningi nabo bangaba nentshisekelo yokufeza le nhloso.
Isilinganiso sokufaneleka singenelela kanjani emncintiswaneni wokudlulisa
Ngale ndlela, isilinganiso sokufaneleka kungenye yezindlela ezisetshenziselwa ukuphatha izicelo. Ukurekhoda lolu lwazi, uchwepheshe kumele wethule imibhalo edingekayo kuhlelo lokusebenza. Ucingo olushicilelwe luqukethe imininingwane ephathelene nale nqubo. Chaza ukuthi umncintiswano uhloselwe bani, ngakho-ke, yibaphi ochwepheshe abangabamba iqhaza. Futhi, nokuthi ungasicubungula kanjani lesi sinyathelo ngesikhathi.
Lolu hlobo lwenqubo luvame ukwenziwa, ngokwesibonelo, emkhakheni wokufundisa. Abahlanganyeli kumele bahambise izicelo zabo ngaphakathi komnqamulajuqu obekelwe le njongo. Isiphathimandla esifanelekile siphethe ukushicilela lesi sinqumo ngomklomelo wokugcina. Lolu hlobo lomncintiswano lungacutshungulwa ezindaweni ezahlukahlukene, ngaphezu komkhakha wezemfundo.
Ukuletha nini ukushiya phansi
Kunezimo ezahlukahlukene lapho uchwepheshe kungenzeka ukuthi ushintshe umbono wakhe maqondana nale nhloso. Mhlawumbe isimo sakho sishintshile futhi ukhetha ukuhoxa emncintiswaneni. Lokhu kusho ukukhansela isicelo. Uma kunjalo, ukusula kufanele kufakwe ngaphakathi kwesikhathi esinqunyelwe leyo nhloso ocingweni. Isisebenzi sikahulumeni esisebenza ngomsebenzi sinikele ngamahora amaningi okufunda ukuze samukele ukuphikiswa. Kusukela lapho ifinyelela inhloso yayo enkulu, ithole okunye okuhle, okuyilawo avela esikalini somncintiswano wokudlulisa.
Umuntu ngamunye wakha iphrojekthi yephrofeshinali ehambelana nezinga lomndeni noma lomuntu ngamunye. Futhi ukuba yisisebenzi sikahulumeni kungenye yezinhlelo eziyingxenye yephrojekthi yomsebenzi walabo abafuna ukuba nesikhundla unomphela. Kepha kunezinqumo eziningi ezenziwe ngumuntu impilo yakhe yonke ukufeza injabulo. Futhi umncintiswano wokudlulisa ungenye yalezo zinqumo ezingashukumisa ugqozi. yomuntu ofuna ukusondela endaweni enencazelo engokomzwelo kuye.
Yimiphi eminye imibuzo ofuna ukuphawula ngayo ngomncintiswano wokudlulisa?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izaziso » Ukuziqeqesha » Uyini umncintiswano wokudlulisa?